IYurophu - I-Mag Incredible
Ungayisiza Kanjani Umpheki Wakho Ukuthola Ibhalansi Engcono Yomsebenzi Nempilo
by U-Anjali D
Ukuba ngumpheki ophezulu endaweni yokudlela edumile kusho isikhundla esiyingqayizivele nesinenhlonipho embonini yezivakashi. Umpheki angenza noma aphule indawo yokudlela. Ngiyayazi indawo yokudlela enomculo obukhoma eduze kwami ​​lapho umculo ubungahambelani kepha…
Ukwehlukanisa - Idolobha Lombusi WaseRoma Osewathatha Umhlalaphansi
Okuchitheke eCroatia, okwaziwa nangokuthi "Idolobha Lombusi WaseRoma Osewathatha Umhlalaphansi" kuyindawo edumile yokuhamba phakathi kojosaka abafuna uhambo olungabizi lokuya phesheya ehlobo. Inothile ngomlando, amafa ezakhiwo namasiko, idolobha elihle eliyitheku lisendaweni…
Izizathu Zokucabangela i-Easyjet Ngokuhamba Kwakho Ngamaholide
by UShubhi G
I-Easyjet iyizinkampani zezindiza ezihamba phambili ezihamba kancane ezizinze e-UK, ezihlanganisa imizila ecishe ibe ngu-700 emazweni angama-32 futhi ibambe iqhaza ekusebenzeni kwezindiza zasekhaya nezamazwe ngamazwe. Yasungulwa ngo-1995 futhi kusukela lapho ibone ukukhula okusheshayo ngokuthengwa, ukufunwa kwabathengi kanye…
Amaqiniso Wokuzijabulisa Angu-5 Wawungawazi NgeVienna
by U-Ivana C.
Ucabanga ngokuya eVienna futhi ufuna ukuzwa okungaphezulu kokuvakasha okuvamile kwezivakashi? IVienna yidolobha elinomlando, indawo yamagugu omhlaba kanye nendawo edumile yezivakashi. Uma uhlela ukuvakasha, wazi izenzakalo zomlando ku…
Australia/Europe/S. Melika/Izikhangibavakashi/Ukubuyekezwa Kokuhamba
Ingabe Ukuya Eholidini Kuncike Kanjani Lapho Uhlala khona?
by UJelena D.
Lapho ngicabanga ukuthi ngingathanda ukuya kuphi eholidini, ngiphupha ngezindawo ezikude kakhulu. Izindawo ezingaphandle engingakaze ngibe kuzo ngaphambili, ezinendawo ebabazekayo nesiko elisha, elijabulisayo ongalizwa. Kepha uma kufika isikhathi sokuhlela kahle…
Amahhotela Esabelomali Aphezulu Ayisi-5 eMalaga
by UHeather Rb
IMalaga, itheku elinamandla lokudoba elinamabhishi amahle kakhulu nemigoqo yeTapas ephilayo, kuyintokozo ukuyihlola. I-vibe yendawo, ifa lomlando, ubuhle bemvelo kanye necuisine emnandi equkethe ukudla kwasolwandle okusha kunqoba izinhliziyo zabahambi. Ngaphezu kwalokho, njengoba iMalaga iyaziqhayisa…
Qala Ukuzijabulisa Okusha, Kungakhathaliseki Ubudala Bakho!
Njengoba sisondela ezinyangeni zasehlobo, abaningi baphupha ngezulu elishisayo namakhefu okuphumula, kepha kuthiwani uma unquma ukunweba iholide lakho lamasonto amabili ehlobo bese wenza i-adventure yangempela? Uma isibonwa njengesizinda sabancane, iminyaka yegebe…
IGrisi yindawo ethokozisayo ongayivakashela nge-cosastline yayo ebabazekayo, ihlathi nezintaba. Ezindaweni eziningi ezisemaphandleni, iGrisi inikeza ukuthula okungatheni futhi ingasinikeza amaholide anokuthula. Izwe liyindawo yezwekazi kanye ne-archipelagic. Ngaphandle kwezwekazi laseGrisi,…
Izinto okufanele zenziwe eValencia, eSpain
IValencia idolobha elithakazelisayo ukuvakashela eSpain, ngaphandle kweMadrid neBarcelona ethandwa kakhulu. Ukwakhiwa kwayo kuyinhlanganisela ephelele yemiklamo yesimanje neye-gothic. Empeleni, iValencia idili lamasiko nokubukwa kweqiniso. Kunezikhungo zokungcebeleka, izindawo zezemidlalo,…
Ukuvakashela iFrench Polynesia
Impucuko yaseFrance Polynesia ibilokhu ikhona iminyaka eyizinkulungwane, mhlawumbe kusukela ngo-2000 BC. Ngaphandle kokungabikho kobukhulu besakhiwo, kuyavunywa ukuthi iphakathi kwempucuko endala kunazo zonke esaphila. IPapeetee idolobha elikhulu kunawo wonke eFrench Polynesia futhi mhlawumbe iyindawo…
1 2 3 ... 5 Olandelayo